လူသားအားလုံးအတွက်: November 2010
'ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လိပ်စာကဒ်.(burundanga)' ဆိုတဲ့ပိုစ့်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာ ဒီပို့စ်လေးကို (သိပြီးတဲ့လူလည်းရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့) အမျိုးသမီးများသာမက အမျိုးသားများပါ (လုယက်ရန်အတွက် စီရင်ခံရနိုင်ပါတယ်) သိသင့်တယ်ထင်လို့မေးလ်ထဲကနေပြန်ရှာပြီး
ဒီခေတ်က Party, Night Club, Day Club တွေများနေတဲ့ခေတ်၊နောက်ပြီးတော့လည်းအဲဒီနေရာတွေမှာ အခါးရည်ကိုမသောက်တတ်တဲ့သူတောင် အနဲဆုံးတော့ အချိုရည် လေးကတော့သောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ကြရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီလိုဗဟုသုတမျိုးကိုမသိထားရင်အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလှပါတယ်။
တချို့စာသားတွေက အများသိကြတဲ့အဓိပ်ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေဖြစ်ပြီး အမြင်ရိုင်းလှတာမို့ ဖျက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို ကိုကျော်သက်လတ်ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာတွေ့တာ အတော်ကြာပါပြီ။အဲဒီတုန်းက ပြန်တင်ခွင့်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမယ့် မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
အခုပြောချင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ မြန်မာအခေါ်အဝေါ်နဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများစာရင်းမှာ ထည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုပြောမယ့်ဆေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တယ်ဆိုရာတွင် ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒမပါသော လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတိုင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
ဤနေရာတွင် မလျှော်ရာ ကိုင်တွယ်ခြင်းမှအစ ........................................................(အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသိကြပြီးဖြစ်မည့် အမြင်ရိုင်းသောရှင်းလင်းချက်စာသားများကိုဖျက်ထားပါသည်-ပုံ မောင်လူအေး) ......... ကြံစည်ခြင်းတို့ပါ ပါဝင်ပါသည်..............................................
ယခုပြောမည့် ဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်ကြောင့်ဆေးခတ်ခံရသူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံနိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှုအား
ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးကာ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကိုပင်မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။ ယင်းဆေးဝါးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိဘဲ အရသာလည်း မရှိသဖြင့် တစ်ဖက်သား မရိပ်မိစေဘဲအချိုရည်အတွင်းသို့ ထည့်ခတ်နိုင်ပေသည်။ Date rape drug အမျိုးအစားအနည်းဆုံး
သုံးမျိုး ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -
Date rape (ချိန်းတွေ့ကျင့်ကြံခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရင် ရမယ်ထင်ပါ့) ဟုအသုံးများသော်လည်း ပညာရှင်အများစုကတော့ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း (drug-facilitated sexual assault) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများအားဓါးပြမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းအရ တိုက်ခိုက်ခြင်းများကဲ့သို့သောအခြားရာဇ၀တ်မှုများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျားမ မရွေး ဆေးအာနိသင်ပြနိုင်ပေသည်။
GHB သည် အရောင်အဆင်းနှင့် အနံ့မရှိသော အရည်၊ အဖြူရောင်အမှုန့်နှင့်ဆေးပြားဟူ၍ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။
ဆေးပုံစံအသစ်သည် အရည်များတွင် ပျော်ဝင်သည့်အခါ အပြာရောင်သန်းသွားသော်လည်းအရောင်မရှိသည့် ဆေးပုံစံဟောင်းအားလည်း ရရှိနိုင်ပေသေးသည်။
ဆေးသည် လျှင်မြန်စွာ အာနိသင်ပြနိုင်သည်။ ဆေးအာနိသင်မပျယ်ခင်ခံသည့်အချိန်မှာမူ ကွဲပြားသည်။ ယင်းသည် ဆေးမည်မျှ
အသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အချက်နှင့် အရက်ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ထားသည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အရက်သည် ထိုဆေးများ၏ အာနိသင်ကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း
ဆေးခတ်ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား
သတိမေ့မြောခြင်း (ဦးနှောက်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း - coma)
အချိန်နှင့် အမှတ်အသားများအား မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း
အမြင်နှင့် အကြားအာရုံများ မမှန်မကန် ဖြစ်လာခြင်း
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ချို့ဆေးတွေက တရားဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို မထိခိုက်ဟုမဆိုလိုပါ။
တရားဝင်ဆေးဝါးဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ(ဆရာဝန်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ) ၏ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အသုံးမပြုသင့်ပါ။
Rohypnol သည် တရားဝင်ဆေးဝါး မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဥရောပနှင့်မက္ကစီကိုတို့တွင် အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါများအတွက် သောက်ရန် ညွှန်လေ့ရှိပြီးခွဲစိတ်ရာတွင် မေ့ဆေးအဖြစ်လည်း တရားဝင် အသုံးပြုတတ်ကြသည်။
Ketamine ကို အမေရိကတွင် လူများနှင့် တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မေ့ဆေးတစ်မျိုးအဖြစ် တရားဝင်သုံးစွဲကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်ဆေးခန်းများရှိ Ketamine ဆေးများအား မကြာခဏလုယက်ခံကြရကြောင်း သိရသည်။
GHB အား narcolepsy ဟုခေါ်သည့် အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါအား ကုသရန်အတွက်အမေရိကတွင် မကြာသေးမီကတရားဝင်ဆေးဝါးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ကိုယ်နှင့်မသိသူများမှ တိုက်ကျွေးသည့် ဖျော်ရည်၊ သောက်ရေစသည့်အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။
အအေးသံဗူးများအား ကိုယ်တိုင်ဖွင့်၍ သောက်ပါ။
ကိုယ်ပိုင် သောက်ရည်နှင့် အအေးဗူးများအား ကိုယ်နှင့်မကွာထား၍အိမ်သာသွားလျှင်ပင် ယူသွားပါ။
အအေးနှင့် ရေအား အခြားသူနှင့် မျှဝေမသောက်ပါနှင့်။ Punchဖျော်ရည်များနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော လူအများ စုပေါင်းသောက်သုံးသည့်ခွက်များ၊ ပုလင်းများအတွင်းမှ အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။
(မိန်းကလေးတွေသင်္ကြန်လိုအချိန်မျိုး သတိထားကြပါ။ အဲဒီဟာတွေထဲမှာဆေးခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။)
ထူးခြားသော အနံ့နှင့် အရသာရှိသော မည်သည့်အရည်ကိုမျှ မသောက်ပါနှင့်။
များသောအားဖြင့် GHB တွင် ငန်သောအရသာ ရှိပါသည်။
ဖြစ်နိုင်သမျှ ချက်ခြင်း ဆီးစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ ဆေးအာနိသင်သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာ ပျယ်သွားနိုင်ပါသည်။
Rohypnol သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင်နာရီပေါင်းများစွာ နေနိုင်ပြီး ဆေးသောက်သုံးပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းတွင်
တစ်စုံတစ်ရာ အကူအညီမရမချင်း ဆီးမသွားပစ်ပါနှင့်။ ရေလောင်းဆေးခြင်း၊ရေချိုးခြင်း သို့မဟုတ် အ၀တ်အစားလဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းအရာများသည်မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်ဆိုသည့် သက်သေများ ဖြစ်ပါသည်။
အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ရဲဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ပါ။ ရှက်ခြင်း၊အပြစ်ရှိသလို ခံစားရခြင်း၊ ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်းတို့သည်ပုံမှန်ဖြစ်တတ်သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များ၏အကြံဉာဏ်ရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲများသို့သွားလျှင် တစ်ဦးတည်းမသွားပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်းသွားခြင်းဖြင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦးအပြန်အလှန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
သင့်စိတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ခပ်ဝေးဝေးတွင်သာနေပါ။
သင် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်နိုင်ခြင်းမရှိသူထံမှ မည်သည့်တိုက်ကျွေးမှုကိုမျှလက်မခံပါနှင့်။
သင်သောက်နေသောခွက်အား စိတ်ချရသော စောင့်ကြည့်ပေးမည့်သူမရှိဘဲအိမ်သာသွားလျှင်ပင် ချန်မထားခဲ့ပါနှင့်။
အထက်ပါ ဆေးများအား အရက်အပြင် အချိုရည်များ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့်ချောကလက်ဖျော်ရည်အပူ စသည်တို့တွင် ထည့်ခတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အားခုခံနိုင်စွမ်းမရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးဝါးများစွာရှိပြီး
အများစုသည် သောက်သုံးသည့် အရည်များအတွင်း အလွယ်တကူ မသိရှိနိုင်ပါ။
ပုလင်းအတွင်းမှ အရည်ကို သောက်သုံးပြီး ပုလင်းအ၀အား သင့်လက်မဖြင့်ပိတ်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုလင်းအားစောင့်ကြည့်ပေးမည့်သူမရှိဘဲ ထားခဲ့လျှင် ယင်းပုလင်းအတွင်း မည်သူကမည်သည့်အရာများ ထည့်လိုက်သည်ဟု သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။
အကယ်၍ ထိုသို့ထားခဲ့မိ၍ ပြန်လာသည့်အခါ သင်၏ ပုလင်း သို့မဟုတ် ခွက်သည်နေရာ ရွေ့နေခြင်း၊ ပုံစံပြောင်းနေခြင်း၊ ပြည့်အောင် ထပ်ဖြည့်ထားသည်ဟုထင်ရခြင်း သို့မဟုတ် အရသာ ထူးခြားနေခြင်းတို့ တွေ့ရှိရပါကဆက်လက်သောက်သုံးခြင်း မပြုပါနှင့်။
အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲတွင် ယခုမှ တွေ့ဖူးသူနှင့်အတူပြန်ရမည်ဆိုပါက အထူးစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။
တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်မျှနှင့် မူးလာသည်ဟု ခံစားလာရပါက ယုံကြည်ရသော မိတ်ဆွေ၊ကလပ်မှ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အရက်ဆိုင် အုပ်ချုပ်သူများထံမှအကူအညီ ရယူပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရောက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင်အကူအညီတောင်းမည့်သူသည် မည်မျှကြာအောင်ပင် သိရှိနေခဲ့သူ ဖြစ်စေကာမူလုံးဝယုံကြည်ရသူ ဟုတ်မဟုတ် သေချာစွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းအန္တရာယ်အား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။
သင်အပြင်သွားသည့်အခါတိုင်း အထက်ပါ အချက်အလက်များအားမှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့်
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အထူးဂရုပြုသင့်ပါကြောင်း။ ။
Dr.Pwint Phyu Phyu
Ref: *http://kyawthetlatt.blogspot.com/*, “Date rape drugs”
written by Stanley \_\_ tags: drug, GHB, Ketamine, rape, Rohypnol *http://stanley.iblogger.org/?cat=20* မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ Tags: ဆေးခတ်ခြင်း, ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါများ”, “သတိလစ်စေရန်
Source: “သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါများ”Posted by မောင်လူအေး [www.onlinepyadaik.com]
on October 24, 2010 at 1:06pm
Posted by မိုးယံ at 1:19 PM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အိန္ဒိယတွင် မွမ်ဘိုင်းအကြမ်းဖက်မှု နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား ကျင်းပ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွမ်ဘိုင်းတွင် စစ်သွေးကြွများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားသည့် နှစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူများကို ဆုတောင်းပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က စစ်သွေးကြွ ၁၀ ဦးသည် ရေကြောင်းလမ်းမှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး မွမ်ဘိုင်းမြို့ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဏာပိုင်များသည် ၃ ရက် အကြာမှ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူ ၁၆၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်သွေးကြွများနှင့် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သားများ သွေးချောင်းစီးသည့် နေရာမှ လွတ်မြောက်ရန် ပြေးလွှားနေသည့် ပုံရိပ်များကို ကမ္ဘာတစ်လွှားသို့ တိုက်ရိုက် ပြသခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် စစ်သွေးကြွ ၁၀ ဦးအနက် ၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ တစ်ဦးကိုသာ ဖမ်းဆီးခဲ့မိကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သည့် စစ်သွေးကြွတစ်ဦးကို မွမ်ဘိုင်း တရားရုံးက သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ယခုလ အစောပိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားသည် မွမ်ဘိုင်းအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူများ၏ မိသားစုများနှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို တွေ့ဆုံစကား ပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအတွက် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ချထားကြောင်း Press Trust သတင်းဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်း အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး P.Chidambaram နှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိများ တက်ရောက်မည် ဖြစ် ကြောင်း သိရှိသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 8:19 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:12 AM 12 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
South Korea president warns North - Asia-Pacific - Al Jazeera English
Posted by မိုးယံ at 10:53 AM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 11:46 AM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
1. ပထမ အကြီးဆုံး = (Tsar Kolokol)ဆာ-ကိုလိုကိုး (ရုရှား)၊
2. ဒုထမ အကြီးဆုံး = အလေးချိန် ၁၂၈ တန်ရှိ မော်စကိုမြို့မှ ခေါင်းလောင်း၊
3. တတိယ အကြီးဆုံး = မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ဖြစ်သည်။
* သို့သော် (Tsar Kolokol)ဆာ-ကိုလိုကိုး ခေါင်းလောင်းကို စိန်ခေါ်သည့် ခေါင်းလောင်းတစ်ခု ရှိသည်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းကာ မွန်ဘာသာအားဖြင့် ‘ အပိန္နသော်’ သို့မဟုတ် ‘ ဓမ္မစေတီ’ ခေါင်းလောင်းပင်ဖြစ်သည်။ စာကိုလိုကောခေါင်းလောင်းသည် ၁၈ ရာစုတွင် သွန်းလုပ်သော ခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းမှာ အေဒီ ၁၅ ရာစုက သွန်းလုပ်ခဲ့သော ခေါင်းလောင်းဖြစ် သဖြင့် နှစ် ၃၀၀ ပို၍စောနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းများအနက် ရှေးအကျဆုံး ခေါင်းလောင်းဖြစ်သည်။
* (မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၂) တွင် ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုလုံး၏အလေးချိန်မှာ တန် ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြပြီး Britanica Emcyclopacedia အတွဲ (၂) တွင် တန် ၁၈၀ ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် Children Emcyclopacedia အတွဲ (၂)တွင် ၂၁၉ တန် ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။)
မေးလ်ထဲရောက်လာတာပါ မူရင်းက ဒီလင့်ခ်ပါ
Posted by မိုးယံ at 10:43 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာမှ သြစတြေးလျသို့ အလုပ်ဗီဇာဖြင့် သွားမည့်သူများအတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မူဝါဒသစ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင့်သုံးမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှ သြစတြေးလျသို့ အလုပ်ဗီဇာ (Skill Migration)ဖြင့် ထွက်ခွာမည့်သူများအတွက် သြစတြေးလျ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မူဝါဒသစ်ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သြစတြေးလျ၏ Department of Immigration and Citizenship ၏ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။
ယခုအခါ သြစတြေးလျနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမား နေရာများအတွက် အမှန်တကယ် အရည်အသွေးရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စာသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီမှုရှိသူများကိုသာ ရွေးချယ်လိုသည့်အတွက် ပွိုင့်စနစ်များဖြင့် အမှတ်ပေးရာတွင် မူလရှိထားသည်ထက် တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သြစတြေးလျရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များနှင့် တရားဝင်ချိတ်ဆက်ထားသော Crown Education မှ Chief Consultant ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းမူဝါသစ်တွင် သြစတြေးလျသို့ Skill Immigration ဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားမည့် သူတိုင်းအား ပွိုင့်စနစ်ဖြင့် အမှတ်ပေးသွားမည့်အပြင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူများအား ဦးစားပေးခြင်း၊ ရရှိခဲ့သောဘွဲ့များနှင့် ပတ်သက်၍ ပွိုင့်ပေးခြင်းများပါဝင်မည့်အပြင် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် လက်မှတ် IELTS7နှင့်အထက်ရရှိမှသာ အမှတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
"အဲဒီ ပွိုင့်စနစ်သစ်မှာ သြစတြေးလျက ဒီပလိုမာလောက်နဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက မာစတာ၊ ဒီဂရီတွေကို ယှဉ်ပြီးပွိုင့်ပေးတာတောင် ထူးခြားချက်တွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လောလောဆယ် သြစတြေးလျကို ကျောင်းသွား တက်မယ့်မြန်မာတွေအပေါ်တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု မရှိသေးပေမယ့် ဒီနိုင်ငံကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်ရဖို့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒတွေကို သေချာစွာ လေ့လာသွားသင့်ပါတယ်"ဟု ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသွားမည့် မူဝါဒသစ်တွင် Skill Migration ဗီဇာ လျှောက်ထားမည့်သူများထဲမှ အသက် ၂၅ မှ ၃၂ နှစ်အရွယ် ဖြစ်ပါက ပွိုင့်အမှတ်အများဆုံး ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး IELTS6ရရှိသော်လည်း ပွိုင့်အနေဖြင့် သုညသာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ လက်ရှိ သြစတြေးလျ၌ ကျောင်းတက်နေသူများနှင့် မကြာမီ သွားရောက်မည့်သူများအတွက် သတိပြုစရာအချက်ပင် ဖြစ်သည်ကို သြစတြေးလျ ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူကအသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 3:49 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အဖေလုပ်သူက လှေကားပေါ် တက်ကာ ပြတင်းပေါက်များအား ဆေးသုတ်နေသည်ကို ခြောက်နှစ်သား
သားငယ်ကဂရုတစိုက် ကြည့်နေသည် ။ အမေကသားကို ပြောတယ် ။
သား - ဘာလဲ ၊ အဲဒီအချိန်ထိ ဖေဖေက ဆေးသုတ်လို့ ပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးလား ဟင် …..
“အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ ကျုပ်က ထမင်းချက်ပဲ ၊ မီးသတ်သမားမှ မဟုတ်တာ”..
မိန်းမကြီးတစ်ဦးသည် သူမဧ။်သမီးပျိုကိုခေါ်ကာ ဆေးခန်းသို့ရောက်လာသည်။
ဆရာဝန်က အမျိုးသမီးငယ်ကိုကြည့်ကာ . .
“ ကိုင်း . . . အ၀တ် အစားတွေချွတ်လိုက်ပါ ”
“လူနာက သမီးမဟုတ်ဖူးရှင့် ကျွန်မပါ ”
“ အော် . . ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုရင် လျှာလေးထုတ်ပြပါ အန်တီ
ယောက္ခမ အထီးဆီ သမက်ဖြစ်သူရောက်လာသည်။
“ အန်ကယ် . .အန်ကယ့်သမီးနဲ့ ကျွန်တော်လက်ထပ်တာ ၃-လ ပဲရှိသေးတယ် ၊
ဒါပေမယ့် ကလေးမွေးပြီ . . ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိ်ုင်မှာလဲ . . ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ က
၉ လလောက်လိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြတာပဲ . . ”
ထိုအခါ ယောက္ခမအထီးက ပြန်မေးသည်။
“ မင်းမိန်းမနဲ့ ၃ လကြာအတူနေတယ်နော် ”
“ မင်းမိန်းမဟာ မင်းနဲ့ ၃လကြာအတူနေတယ်နော် ”
“ ဟုတ်ကဲ့ နေပါတယ် ”
“ မင်းတို့ နှစ်ယောက်အတူနေတာ ၃လရှိပြီနော်”
“ အေး အဲဒါဆို ၃+၃+၃ ဘယ်လောက်လဲ”
“ ၉ပါ အန်ကယ်”
“ အေး . . . အဲဒါပဲ . . . ငါ့ကို နောက်လာပြီး အနှောက်အယှက်မပေးနဲ့ ”
တနေ့ မှာ အဖွား ကြီး တယောက် သွား ကိုက် ဝေဒနာ ကို အပြင်း အထန် ခံ စား နေရ ရှာ သ တဲ့...
နောက် ဆုံး မ ခံ စား နိုင် တာ နဲ့ .. ဆရာဝန် နဲ့ သွားပြ သတဲ့...
ဒါပေမယ့် ခက် တာ က သူပြ တဲ့ ဆရာဝန် က သွား ဆရာဝန် မဟုတ် ပဲ... O.g ဖြစ် နေတယ်..
အဘွားကြီး ။ ။ ကျွန်မ မခံ မရပ် နိုင် အောင် ကိုက် ခဲ နေ တာ ပဲ ဆရာရယ်
ဆရာဝန် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့အဖွား..ကျွန်တော်သေသေချာချာ စစ် ဆေး ပေး ပါ့မယ်
ဆရာဝန် မှာ သေ သေ ချာ ချာ စစ် ဆေး ပြီး....
ဆရာဝန်။ ။ အဖွား ရ... ဘာမှ လည်း မဖြစ် ပါလား.....
အဘွားကြီး။ ။ မသိပါဘူး ဆရာရယ် သွားက တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပို ပြီး ကိုက် လာ
လို့ လာ ဆေးခန်းလာပြတာ ပဲ....
ဆရာဝန်။ ။ အမ် အဖွား က သွား ကိုက် နေ တာ လား... ဘာ လို့ ကျွန်တော့ ကို
စောစော က မပြောလည်း.....
ထိုအခါ အဘွားကြီး ပြော လိုက်ပုံ က.........
အဘွားကြီး ။ ။ မသိဘူး လေ ဆရာရယ် ... ကျွန်မက .. သွား ရဲ့ အမြစ် ကို
ကျွန်တော်လဲ ချစ်တဲ့သူကို ယူမှာပဲ
တနေ့ မှာ သားအဖ (၂)ယောက်စကားလက်ဆုံကြနေကြပါတယ်။ သားက အခုမှ စကားတတ်စ
(၇)နှစ် ပတ်ဝန်းကျင် လောက်ပဲရှိပါအုံးမယ်။ အဲဒီမှာ သားက အဖေ့ ကိုဘာမေးလဲဆိုတော့ 
သား ... အမေ့ ကိုဘာဖြစ်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာလဲ တဲ့?
အဖေ... သားမေမေ ကို အဖေ့ အရမ်းချစ်လို့ ပေါ့ ကွ ..
သား... မေမေ ကရော ဖေဖေ့ကိုချစ်လား ??
အရမ်းချစ် လို့ ဖေ့ ဖေ့ ကို လက်ထပ်ခဲ့ တာပေါ့ ကွ
အဲဒီမှာ သားက တစခန်းထ လာတယ် ...
သား... အဲဒါဆို သားလဲ သားကိုအရမ်းချစ် တဲ့ သူကို ပဲ ယူမှာပေါ့ ဗျာ
အဖေ... ဟေ မင်း မှာအရမ်းချစ်တဲ့ သူ ရှိလားကွ
သား.... သားကိုအရမ်းချစ်တဲ့ သူ ရှိတယ် ...အဘွားပေါ့..သားကြီးလာရင်
အဖေ... ဟာ ဖြစ်မှလားကွ အဲဒါမင်း အဘွား ငါ့ ကိုမွေးခဲ့ အမေလေ ..
သား... ဟာ ..ဖေဖေ မရဘူးဗျာ ...အဘွား ကိုပဲ လက်ထပ်မယ် ...အဖေ့ ကျတော့
သားအမေ ကို လက်ထပ်ပြီး ..သားကျတော့ ဘာလို့ဖေဖေ့ အမေ့ ကို လက်ထပ်လို
အဖေ... ဟေ .......
တိရစ္ဆာန်တစ်စု ၀ိုင်းဖွဲ့ စားသောက်နေကြသည် ။ အာသွက်လျှာသွက် ဖြစ်နေသဖြင့်
စကားဝိုင်းသည် စိုးပြည်လှသည် ။ အရက်ကုန်သွားသဖြင့် အရက်ထပ်ဝယ်ရန်
ဆုံးဖြစ်လိုက်ကြသည် ။ သို့နှင့် လိပ်ကို အရက်ဝယ်ရန် လွှတ်လိုက်၏ ။ တစ်နာရီ
၊ နှစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ လိပ်ပေါ်မလာချေ ။ တိရစ္ဆာန်များထဲမှ လိပ်ကို
ကျိန်ဆဲသံများ ပေါ်ထွက်လာသည် ။ မနီးမဝေးချုံထဲမှ လိပ်ထွက်လာပြီး
“ကျွန်တော့်ကွယ်ရာမှာ အခုလို အတင်းပြောရင် ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဗျာ”
မတတ်နိုင် ။ လိပ်အစား ကင်းခြေများကို အ၀ယ်လွှတ်လိုက်ကြသည် ။ ငါးနာရီ ကြာမှ
ကင်းခြေများပြန်ရောက်လာသည် ။ အားလုံးက ၀ိုင်းအော်ကြသည် ။
“ဟေ့ကောင် ........ မင်းသွားတာကြာလှချည့်လားကွ”
“အရက်ဆိုင် ၀င်ပေါက်မှာ ဘယ်ကောင်လဲမသိဘူး ။ ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခု ချိတ်ထားလို့ ”
“ ဘာဆိုင်းဘုတ်လဲ ”
“ဆိုင်ထဲမ၀င်ခင် ခြေထောက်ကိုစင်အောင်သုတ်ပါတဲ့ ”
Posted by မိုးယံ at 1:38 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဒီနေ့ညနေခင်းအတွက် အထူးခြားဆုံး ထိပ်တန်းရောက်သတင်းကတော့
မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ သတင်းပါ။
လွတ်မြောက်လာပြီးပြီးချင်း အခု နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထုကို မိနစ်ပိုင်း သူမခြံရှေ့မှာ
ထွက်စကားပြောခဲ့ပြီး အခု နေအိမ်အတွင်းမှာ အခြား အဲန်အယ်လ်ဒီ
ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့
အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီကနေ မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ နာရီ စွန်းစွန်းမှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ
ပြန်လွတ်ပါတယ်။ မလွတ်ခင်မှာ ကားသုံးစင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝင်းထဲ
၀င်သွားပါတယ်။ အဲဒီကားတွေ ပြန်ထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံရှေ့လမ်းမှာရှိတဲ့ အတားအဆီးတွေကို အာဏာပိုင်တွေက
ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ခြံလမ်းထိပ်မှာစောင့်နေကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လူထုဟာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့ကို အပြေးအလွှား သွားရောက်စုဝေးလိုက်ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သိပ်မကြာခင်မှာ သူ့ခြံရှေ့ကိုထွက်ပြီး လူထုကို
အသံချဲ့စက်တွေ တပ်ဆင်ထားတာ မရှိခြင်းကြောင့် စောင့်နေတဲ့လူထုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသံကို ကောင်းကောင်း မကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မနက်ဖြန် ၁၂
နာရီမှာ လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောစရာရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ပြောသွားပါတယ်။ ဒီနောက် နေအိမ်တွင်း ၀င်ရောက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ စည်းဝေးနေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မလွတ်ခင်က ဒေါ်စု ခြံရှေ့က အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ခြံရှေ့ရောက်နေသူတဦးကို
“တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ကုက္ကိုင်းမီးပွိုင့်ကနေ ဒီဖက်တကျောလုံး လူတွေက အပြည့်ပဲဗျ။ ကားတွေလည်း အများကြီးပဲ ရောက်နေတယ်။ လူတွေအားလုံးက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ဖက်ကို ကြည့်နေတာပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ဌာနချုပ်ရုံးရှေ့မှာဆိုလည်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေဆိုပြီး အော်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတယ်။
ကားအ၀င်အထွက်ရှိတော့ ဒေါ်စုလွှတ်မယ့် ကားဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း
ဒေါ်စုလွတ်တယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးကြားရတဲ့ သတင်းအရတော့
လုံခြုံရေးအခြေအနေရော ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ -
“ဒီအခြေအနေမှာတော့ ယူနီဖောင်းဝတ် လုံခြုံရေးတော့မတွေ့ဘူးဗျ။ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေက သံဆူးကြိုးရဲ့ ဟိုးဖက်မှာပဲရှိတယ်။
ထောက်ခံသူအင်အား ပတ်ဝန်းကျင်ကို လာရောက်တဲ့ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ -
“ဒီမှာ လောလောဆယ် သုံးထောင် လေးထောင်လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။”
လုံခြုံရေးအရ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိလား။ အားလုံး အေးအေးချမ်းချမ်းပဲလား။ -
“အခြေအနေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေက ၀မ်းသာကြိုဆိုနိုင်ဖို့ တခုခုဖြစ်လာမှာကို သူတို့စိုးရိမ်တကြီးနဲ့
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်နေပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ကြေညာနေပါတယ်။
သူတို့မူဝါဒအရ လမ်းမပေါ် ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လွတ်မြောက်မှုကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုဖို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနေ့ကစလို့ ထောင်နဲ့ချီတဲ လူအုပ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ရုံးချုပ်မှာရော ဒေါ်စုခြံနားမှာပါ စောင့်ကြိုနေကြတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမကို အကန့်အသတ်နဲ့ လွှတ်မယ်ဆိုရင်တော့
လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အဲန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်မှုသတင်းကိုတော့ အသံလွှင့်ချိန်အတွင်း
ထူးခြားရင် ထူးခြားသလို တင်ဆက်သွားပါမယ်။
Posted by မိုးယံ at 4:14 AM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:17 AM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest